05/11/2018 - Page 2 sur 3 -
Fanabezana : Ankizy 460 hahazo fitaovana
Ankoatra ny fifidianana, vanim-potoana manamarika ny fidiran’ny mpiantra ihany koa ny volana novambra. Arakan y fanadihadiana natao teo anivon’ny ankohonana nanny EPM dia 27% ny fahafahan’ny fianakaviana sahirana mampiana-janaka tamin’ny 2010 ary 16,6% ny tahan’ny …Tohiny
Teknolojia maoderina : Handray ny « Novembre numérique » ny IFM
Hiavaka ny hetsika etsy amin’ny Institut français de Madagascar mandritra ny volana novambra. Hampiantrano ny hetsika momba ny teknolojia maoderina ny IFM mandritra ity volana ity ary amin’ireo tahala rehetra misy ao amin’izany toerana ity. …Tohiny
Distrikan’Ifanadiana : Zaza roalahy ahiana voan’ny pesta atoditarimo
Miparitaka ny aretina pesta. Ankizy roalahy 8 sy 16 taona no nahitana trangana aretina pesta atoditarimo ka nampiahiahy tany amin’ny kaominina Ranomafana, distrikan’Ifanadiana, ny alakamisy 1 novambra lasa teo. Tsy niandriandry ny tompon’andraikitra fa avy …Tohiny
Fifaninana ENMG : Nofoanan’ny minisiteran’ny Fitsarana
Niteraka resabe ny fisian’ny kolikoly teo anivon’ny fifaninanana hidirana ho mpianatra eo anivon’ny Sekoly nasionaly ho an’ny mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG). Mazava ny an’ny minisitera fa foanana avy hatrany ny valin’ny fifaninanana tamin’iny andiany iny. …Tohiny